Hal arrin oo uu inta badan u istaagi jirey Xasan Cali Khayrre oo laga tebey dhanka DF | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Hal arrin oo uu inta badan u istaagi jirey Xasan Cali Khayrre...
Hal arrin oo uu inta badan u istaagi jirey Xasan Cali Khayrre oo laga tebey dhanka DF
(Hadalsame) 08 Sebt 2020 – RW Xasan Cali Khayrre ayaa si halhaleel ah oo khiyaamaysan 25-kii bishii Luulyo waxaa inay xilkii ka qaadeen sheegay Baarlamanka Dhexe, qorshe salka ku hayey muddo kororsi dhaan-dabagaalle noqday oo dhegta loogu sheegay.
Yeelkeede, tan iyo bixitaankii RW hore weli lama magacaabin wax RW ah oo xilka la wareega soona dhisa Xukuumaddii howlaha wadi lahayd xilligan xasaasiga ah, sidoo kale Madaxtooyadu ma sheegin inay howsha wadeeyso Xukuumad Xil-gaarsiin ah oo diyaarisa farsamooyinka doorashada la dhowrayo, taasoo keentay habacsanaan iyo dalkii oo galay xaalad hubaal la’aan ah oo ay ka muuqato mas’uuliyad darro wayn.
Ha yeeshee, RW hore ayaa waxyaabaha lagu tegey waxaa ka mid ah sidii uu inta badan ula macaamili jirey arrimaha soo kordha sida qaraxyada, musiibooyinka dabiiciga ah iwm, waloow meelaha qaar lagu dhaliilo, isagoo booqan jirey isbitaallada la geeyo dhaawacyada dadwaynaha iyo ciidanka, sidoo kalena war kasoo saari jirey cabashooyinka dadwaynaha in badan oo ka mid ah.
Tusaale, waxaa bartamihii bishii Agoosto weerar ay dad badani ku dhinteen lagu qaaday Elite Hotel, waxaana dadkii halkaa ku dhintay ka mid ahaa dhallinyaro ka tirsan Booliiska Gaarka ah ee Haramcad, yeelkeede, halkii isbitaallada lagu booqan lahaa, kuwa dhaawocoodu daran yahay dibedaha loo qaadi lahaa ama ehelkooda ballan qaad loo samayn lahaa, waxaa baraha bulshada wareegayey in qaaraan loogu ururiyo ”Go Fund Me”.
Sidoo kale, waxaa haatan taagan muran ka dhashay imtixaanno ay caddahay in loo saxay qaab uu khaladaad fara badan oo farsamo uu ka muuqdo, balse waloow ay dad badani qaylinayaan ma jirto cid ka hoos qaadday, taasoo ah taatiko aan muddo dheer shaqayn karin, marka la iska dhega tiro walaaca shacabka, oo nasiib darro aysan hadda muuqanin cid ay wax waydiiyaan.
Previous articleHeshiiska Imaaraadka & Israel oo aan wax wayn looga arkin gudaha Israel + Sababta (Qaybtii 3-aad)
Next article”Talyaanigu waxayba nooga dheereeyeen ciyaartii Dutch-ka” – Macallinka Holland oo amaan kala dul dhacay Azzurri + Sawirro